Nahoana no malahelo ny vanim-potoana manjelanjelatra? Afaka ny fanaintainana ambany kokoa alohan'ny isam-bolana, aorian'ny fadimbolana? Ny volo dia malahelo amin'ny isam-bolana - inona no tokony hatao?
Nahoana no malahelo ny vanim-potoana manjelanjelatra ary ahoana no ahafahako manampy ny tenako?
Ny fitsaboana matetika dia miaraka amin'ny soritr'aretina fanampiny. Ny aretina ao amin'ny kibo, ny tratra, ny fitsaboana, ny fahasimban'ny fahasalamana ankapobeny - ireo tranga misy eo. Andeha hojerentsika ny fizotran'ny antsipiriany bebe kokoa ary fantaro: maninona no mitebiteby ny faritra lonaka mandritra ny vanim-potoana isam-bolana, inona no anton'ity tranga ity, araka ny voalaza.
Afaka ny fanaintainana ambany kokoa amin'ny fadimbolana ve?
Ny ankizivavy sasany, rehefa mitsidika manam-pahaizana momba ny tovovavy, dia mitaraina fa manana fanaintainana ambany izy ireo amin'ny fadimbolana. Matetika ny dokotera no manondro ny fahatsapana ara-batana toy izany, ary miantso azy ireo ho vahaolana amin'ny fitsipika. Noho izany, amin'ny fadimbolana, dia mihatra ny fihenjanana amin'ny fitaovana manjavozavo sy ny musculaire ao amin'ny faritra miaina. Ny fifandonana amin'ny tranonjaza, izay manandrana mandroaka ny rà sy ny endometrium any ivelany, dia mikorontana amin'ny departemanta mpifanolo-bodirindrina.
Ankoatr'izay, ny fihenan'ny taova dia hormonal. Ny fitomboan'ny bakteria dia mivadika amin'ny fihetsika hozatra, manazava ny antony mahatonga ny fanaintainan'ny lomotra ara-dalàna. Na izany aza, tsy maintsy tsaroana fa ny fanaintainana mafy mandritra ny fotoana fadimbolana ao amin'ny faritra ao an-kibo, mamerina, ny tongotra dia afaka manondro ny areti-maso ao anaty valizy. Mba hamaritana ny antony marina dia ilaina ny fandinihana tanteraka sy ny fanadinana.
Fanaintainana miverina amin'ny fadimbolana - antony
Matetika matetika no mahatsapa ny fahatsapana mahatsiravina mialohan'ny hanombohan'ny fadimbolana. Andro vitsivitsy monja dia hitan'ny vehivavy iray ny fisehoana ny fanaintainana ao ambany kibo, izay afaka manome. Amin'ity tranga ity dia mitohy ny fahantrana na dia mandritra ny fitsaboana aza. Miresaka momba ny antony mahatonga ny dokotera mandritra ny vanim-potoanan'ny taovam-pananahana ireto antony ireto:
Hormonal disbalance. Vokatry ny fiovana mafy amin'ny hormones momba ny firaisana ara-nofo, mahatsapa fientanam-po ireo tovovavy.
Ny fihenan'ny aty amin'ny aretin-kozatra. Ny fampihenana ny hozatry ny tranon-jaza dia mitarika ny fahasosoran'ireo mpitsabo ao amin'ny faritra miafina. Ny fientanentanana avy amin'ireny rafitra ireny dia azo alefa any amin'ny faritra lonaka ihany koa.
Ahitana fiforonan'ny estrogen. Matetika matetika io trangam-panatanjahan-tena io no hita ao amin'ny vehivavy efa zokinjokiny 30 taona.
Ny fametrahana tsy fetezana ny tranonjaza ao amin'ny tonon-kavoana kely. Ny fahatsapana mahatsiravina dia matetika no voamarikan'ireo vehivavy izay nanova ny mombamomba ny taolam-pananahana - ny latabatra dia nolavahana avy any aoriana. Mihabetsaka ny fitomboan'ny volany amin'ny volana isam-bolana manelingelina ny fiafaran'aretina any amin'ny farany ambany.
Fihetseham-panafody amin'ny fitrandrahana kely ao anaty fitoeram-bala. Matetika ny fahantrana dia vokatry ny fihanaky ny aretina mitaiza ao amin'ny rafitra fananahana.
Nahoana ny vavony sy ny ambany lamosina mandritra ny fadimbolana?
Anisan'ireo antony manazava ny zava-misy amin'ny fanaintainan'ny lomotra sy ny bovidia mandritra ny volana maromaro, dia ilaina ny manamarika ny fampiasana ny fanabeazana ain'ny intrauterine. Ny tsy fetezan'ny siramamy dia mety hiteraka fandikana ny ratra ratsin'ny reny. Vokatry ny tsy fahampian-tsakany, ny endriky ny fery amin'ny kibo ambany sy ny aoriana kely dia tezitra. Amin'ity tranga ity dia ilaina ny manova ny fomba fanabeazana aizana, ampiasaina fomba fiasa hafa.
Rehefa malahelo amin'ny taolam-paty ny taolan-tehezana, ny antony dia voatonona etsy ambony, ny fifandimbiasan'ny rano dia matetika voatsikera. Vokatry ny fihanaky ny rano, dia mitombo ny fihenan-tsakafon'ny atidoha. Mihamitombo ny habetsahan'ny uterus sy ny appendages, manomboka mamoaka ny fiafarana nerveo eo amin'ny faritry ny hazolena masina, izay misy ilay fanaintainana manomboka amin'ny lamosina ambany, izay mahavaky ny tongotra matetika.
Ny fanaintainana amin'ny ambany kely sy ny tongony amin'ny fotoana fadimbolana
Ny fanaintainana any aoriana dia mety miaraka amin'ny fahatsapana marary amin'ny tongotra. Vehivavy maro no manamarika ny fahalevonany, ny fahatokisan-tena. Matetika dia toy izany ny famantarana famantarana toy izany amin'ny fitantanana ny fanoloran-tena amin'ny vehivavy nomena sy ireo izay noraisin'ny cesarean . Izany dia noho ny fiovana eo amin'ny toerana misy ny taolam-paty. Vokatr'izany dia miova koa ny mikraoba sy ny fandavan-tena ao amin'io faritra io. Ankoatra izany, ny aretin-koditra (arina varikose), izay mampiavaka ny vehivavy matotra, dia mahatonga ny fanaintainana amin'ny tongotra matetika.
Maivana kely sy maharary volana
Ny fihenan'ny voan'ny hormonina momba ny firaisana ara-nofo ao amin'ny ra dia misy fiantraikany amin'ny vanim-potoanan'ny taovam-pandrenesana amin'ny fanovana ny habetsaky ny tsiambaratelo, ny fisehoan'ny hatezerana. Ny fihenjanana matetika, ny fikarakarana ara-batana, ny aretin'ny rafitra fananahana dia miteraka fanitsakitsahana ny hormonal background. Amin'io tranga io dia tsy mahomby ny fivoaran'ny endometrium . Noho izany, ny tenda dia maharary ihany koa mandritra ny fadimbolana. Ny haben'ny endometrial dia tsy manam-potoana hanangonana ny hateviny ilaina amin'ny tsingerina.
Vokatr'izany dia mitatitra ny fihenan'ny volan'ny isam-bolana ny vehivavy. Lasa marefo izy ireo. Amin'ity tranga ity, ny dingana tena fandavana ny fandrenesana ny endometrial dia miaraka amin'ny fahantrana mafy. Ny fanaintainana dia mipetraka ao amin'ny ampahatelon'ny baoritra ary matetika omena azy. Taorian'ny vanim-potoanan'ny ratra dia nanjavona ilay ratra, nahatsapa tsara ilay vehivavy.
Afaka mampalahelo ve ny lolohavoha miverina alohan'ny fotoana?
Ny fanaintainana tany ambany kely talohan'ny lehilahy dia nandrakitra an-tsoratra vehivavy vehivavy olon-dehibe. Misy ifandraisany amin'ny fiovan'ny rafitra mala-kozika izay mitranga ao amin'ny vanim-potoanan'ny klimakterika. Amin'ny ankapobeny dia vokatry ny tsy fisian'ny hormones momba ny firaisana ara-nofo, ny fandroahana ny rafitra fananahana. Na izany aza, amin'ny ankizivavy, ny fanaintainana eo amin'ny faritra lonaka dia tokony ho fotoana handefasana dokotera.
Ny tendany dia tena malahelo talohan'ny vanim-potoanan'ny ratra sy noho ny fiovan'ny hormonal background. Tena mampalahelo izany ho an'ireo zatovovavy. Noho ny asan'ny gonads, ny fihenan'ny taolam-paty dia miseho amin'ny asa lehibe kokoa. Vokatr'izany dia misy ny fihenjanana ao amin'ny faritra misy azy. Ankoatr'izany, ny fiterahana ny fiafarana nerlandy dia mety ho voamarika, noho ny fivoahana kely ny tovovavy dia nitombo nandritra ny fadimbolana.
Afaka ny fanaintainana ambany kokoa aorian'ny fadimbolana?
Ny fanaintainana miverina aorian'ny fadimbolana, izay nifarana vao haingana, dia matetika noho ny aretina mikraoba. Ity trangan-javatra ity dia mifandraika amin'ny fitomboan'ny hormonina ara-nofo ao amin'ny rà. Matetika ny vehivavy no mihinana zava-mahadomelina hormonina amin'ny fitsaboana aretina fihinan'ny hoditra. Amin'io toe-javatra io, dia misy ny fitomboan'ny habetsaky ny fanasitranana ara-pananahana, izay ahafahana manery ny tsindry amin'ny faritra misy lomano, izay misy ny fiafarana nerve. Amin'ity tranga ity dia misy ny marary mampiaraka:
mitombo ny lanjany;
fahamendrehana ao am-po;
Ny tsy fahampian-tsakafo any an-damosina aorian'ny taom-piotazana dia mety hiteraka korontana eo amin'ny ovaire. Miaraka amin'io fandikana io, dia mihitsoka ny akoran'ilay ivelany. Noho izany, misy fanaintainana mafy ao anaty fihenam-bolana isam-bolana, ao amin'ny faran'ny vavony na kibo, manome amin'ny hips, anus. Eo an-dalam-pandrefesana dia mihatsara ny toe-tsaina tsy mitongilana, mihena ny tosidra, ary mitombo ny fihenan'ny sifotra. Ny fandikana dia mitaky fanampiana vonjy taitra.
Fanaintainana miverina amin'ny fadimbolana - inona no tokony hatao?
Raha misy fanaintainana ao aoriana kely amin'ny fotoana iray dia ilaina ny manatona dokotera. Ny antony dia manazava ny antony mahatonga ny vanim-potoana manjelanjelatra, dia mety maro ireo. Na izany aza, hanamora ny fahatsaram-piainana amin'ny fotoana iray ahafahan'ny vehivavy iray sy mahaleo tena:
mampihena ny habetsaky ny sira noviraviraina;
potoana mahazatra dia manome fampiononana ho any aoriana;
Tablets ho an'ny fanaintainana miverina amin'ny fadimbolana
Ny fanaintainana eo ambany lamosina mandritra ny fadimbolana dia azo sakanana amin'ny fisotroana fanafody. Ny safidin'izy ireo dia mifototra amin'ny anton'ny fisehoan-javatra. Noho izany amin'ny fisintahana mafy amin'ny tranonjaza amin'ny fampiasana antispasmodics:
Rehefa mampalahelo ny areti-nify ao anaty valizy, ny dokotera dia manoro ny areti-mandringana:
Mba hampitsaharana ny fanafihana ny fanaintainana, raha tsy fantatry ny zazavavy ny antony, alohan'ny niantsoan'ny dokotera iray, afaka mampiasa fanafody ianao:
Myoma amin'ny tranonjaza - fitsaboana amin'ny fitsaboana amin'ny vahoaka
Fanitsakitsahana ny mikroflora amin'ny vava
Ahoana ny famerenana ny fadimbolana?
Aretina fitsaboana Chlamydia
Ny lakandrano mihetsiketsika - inona izany?
Ahoana ny fomba fitondrana ovaivana polycystika?
Fanavaozana ny vava
Faharetan'ny fotoana fadimbolana any amin'ny tanora
Reny sy zanaka efatra nanangana trano ho an'ny lesona avy amin'ny Youtube
Top 10 fiankohofana be indrindra
Kitapo tsotra iray - fomba tsara indrindra hanomanana mofomamy fialantsasatra
Ahoana ny fomba hampiasana volana?
Toothstone - fitsaboana
Anarana iray ho an'ny Scottish Scottish Cat
Boots eo ambanin'ny akanjo volom-borona
Fotoam-pivavahana lohataona amin'ny natiora
Skirt amin'ny tavy ambony
Zavamaneno volamena modely 2014
Mandra-pahoviana ny estrus no farany amin'ny saka?
Bijatra ho an'ny volamena